I-HONAY HOUSE enombono omangalisayo we-MOUNTAINS - I-Airbnb
I-HONAY HOUSE enombono omangalisayo we-MOUNTAINS
Dursztyn, Małopolskie, i-Poland
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Filip
I-HONAY HOUSE iyindlu yesimanje, evumelana nemvelo etholakala phezulu kwelinye lamagquma amahle aseSpiš, ukusuka lapho kunombono omangalisayo wezintaba eziphakeme zeTatra. Indlu yethu iyindawo ethokomele, eklanywe ngokucophelela yawo wonke umuntu ofuna ukuxhumana nemvelo, ukuzijabulisa okusebenzayo noma isiphephelo ezindaweni zokungcebeleka eziminyene zasePodhale.
I-HONAY HOUSE ihlezi eceleni kwegquma elivulekile, endaweni yayo eduze nekhaya labanikazi kanye neYurt yaseMongolia. Ngale ndlela izihambeli ziba nobumfihlo kanye nosizo oluseduze uma kudingeka.
Indlu ephansi inegumbi lokuphumula elivulekile elinendlu yokugezela ehlukile ekhululekile, ezungezwe ikhishi ekhoneni. Igumbi lokuhlala linosofa othokomele, itafula kanye nesihlalo esinyakazayo. Ikhishi linefriji eyakhelwe ngaphakathi, umshini wokuwasha, usinki kanye ne-induction hob. Kunendlu yokugeza endlini yokugezela. Ku-mezzanine, sinekamelo lokulala elivulekile elinombhede ophindwe kabili (umatilasi obanzi ongu-180 cm), amawodrobhu kanye nedeski lomsebenzi. Yonke ingaphakathi iqedwe ngokhuni oluqinile lwe-spruce.
Ehlobo, ikakhulukazi ihamba ezintabeni zasePieniny, Gorce naseTatra. Kubagibeli bamabhayisikili be-MTB, isiqalo se-"Spiska Loop", "I-Bicycle Trail ezungeze i-Tatras" noma i-Turbacz. Abagibeli bezikebhe bazofika ngokushesha eLake Czorsztyńskie bebuka i-Niedzica Castle. Ebusika, ukungena emotweni emaminithini ambalwa noma ngaphezulu uzofika e-Białka Tatrzańska, Slovakia noma Zakopane. Futhi lapho ubuyela ekhaya, ukhathele kusihlwa, uzokwazi ukuphumula ngokunethezeka, uhlale endaweni yokhuni futhi ulalele ihlane lamagquma.
Ngokuvamile sikhona ukuze sisize, kodwa uma singatholakali mathupha singanikeza isiqondiso ngocingo.